यस्ता ‘क्रूर’ले पनि संसार चलाए ! – NawalpurTimes.com
यस्ता ‘क्रूर’ले पनि संसार चलाए !
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक ८ गते १४:००
काठमाडौं। संसारमा यस्ता मानिसले पनि शासन गरे, जसको दिमागमा क्रूरताबाहेक अर्थोक केही थिएन। ती हैकम चलाउँथे, नटेर्नेलाई विभत्स ढंगमा मारिदिन्थे।
तिनका हृदयमा दया भन्ने कुरो किञ्चित पनि थिएन। तिनलाई आफ्नो प्रशंसाबाहेक सामान्य विरोध पनि सुन्ने इच्छा हुँदैनथ्यो। तिनलाई जसरी भए पनि आफ्नो शासनसत्ता टिकाउनु र लम्बाउनु थियो। ती यतिसम्म सनकी थिए कि, आफ्ना चाहना पूरा गर्न मानिसलाई बलिको बोको नै बनाउन पछि हट्दैनथे।
यस्ता शासकले मानव सभ्यतालाई नै शर्मनाक बनाइदिए। यिनले क्रूरताको हद पार गरे। आफ्नो शक्तिका बलमा आममानिसमाथि भयंकर अपराध गरे। यो दुनियाँमा कोही शासक त मानिसको मासु खानेसमेत देखापरे! यस्तै तानशाह र क्रूर शासकका कारण निहत्था, निर्दोष र निरापराध लाखौं मानिसले ज्यान गुमाए।
अचम्म त के छ भने, दुनियाँमा अति क्रूरतम शासन गरेर गएका मानिसका अनुयायी अहिले पनि भेटिन्छन्। तिनका विचार लागू गरेर यो आधुनिक समाजलाई चलाउने चाहना तिनले राख्छन्!
यिनी मंगोल आक्रमणकारी थिए। १३औं शताब्दीको सुरुआतमा चंगेज खान र उनका मंगोल सैनिक जुन सहरमा पस्थे त्यो स्थान बरबाद हुन्थ्यो। यिनीहरू प्रवेश गरेका सहरमा लुटपाट, हत्या, बलात्कार हुन्थ्यो।
त्यतिमात्र कहाँ हो र जुनजुन सहरमा जान्थे, त्यो सहरमा मानिसको हत्या गरेर तिनको टाउको जम्मा पार्थे र त्यसलाई देखाउँदै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्थे।
त्यसबखत मंगोल साम्राज्य चीनको राजधानी पेइचिङदेखि रुसको राजधानी मस्कोसम्म फैलिएको थियो। भनिन्छ, चंगेज खानले ठूलो संख्यामा मुस्लिमको पनि हत्या गरेका थिए। चंगेजले हजारौं महिलासँग यौनसम्पर्क गरेको समेत बताइन्छ।
भ्लाड अर्थात् ड्र्याकुला
रोमानियाको वालासियाका राजकुमार भ्लाड थर्डलाई ड्र्याकुला नामबाट पनि चिनिन्छ। यिनको जन्म सन् १४३१ मा ट्रान्सिल्भेनियामा भएको थियो।
भनिन्छ, यिनी मानिसको रगत पिउन मन पराउँथे। त्यसो त कतिपयले यो कुरालाई अफवाहमात्र मानेका पनि छन्। उस्मानिया सल्तनतका विरुद्ध युद्धमा उनले यति घिनलाग्दो काम गरे कि, त्यसपछि मानिसहरू यिनलाई दुष्ट मान्न थाले।
यिनले युद्धमा दुश्मनलाई फलामको भालामा टाँग्थे र झुण्डिएको लाशको जंगल खडा गर्थे, यही कारण यिनलाई ड्र्याकुलाको संज्ञा दिइएको हो। उनी आफ्ना दुश्मनलाई भालाको टुप्पोमा उनिदिन्थे र बजारमा प्रदर्शन गरिदिन्थे।
युगान्डाका तानाशाह इदी अमिनलाई मानिसको मासु खाने सोख थियो। यही कारण यिनलाई नरभक्षी शासकका नामले पनि चिनिन्छ।
भनिन्छ, यिनी गरिब र माग्नेलाई गोली हानेर उडाइदिन्थे। आफ्नो कार्यकालमा उनले कम्तीमा पाँच लाख मानिसको हत्या गराए, जसमध्ये थुप्रै उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीसमेत थिए। यिनको क्रूरता यतिसम्म थियो कि, यिनलाई मानिसहरू ‘म्याड म्यान अफ अफ्रिका’का नामले पनि चिन्थे। यस्तो दाबी पनि गरिएको थियो कि, उनको फ्रिजमा मानिसको मासु भेटिएको थियो।
१९७९ मा जब तान्जनियाँ र इदी अमिनका विरोधी सेनाले हात मिलाए तब यिनी भागेर साउदी अरब पुगे। र, त्यही यी संसारकै क्रूरतम्मध्येका एक शासकको २००३ मा मृत्यु भयो।
यिनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक थिए, सोही पार्टी त्यस देशमा अहिले पनि शक्तिशाली छ।
चिनियाँ नागरिक अहिले पनि माओको तारिफ गरेर थाक्दैनन्। त्यतिमात्र होइन, नेपालमा त एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध नै यिनकै नाममा खुलेको पार्टीले गर्‍यो। ‘माओवाद’ नेपालमात्र होइन, भारतलगायत संसारका कतिपय मुलुकमा अहिले पनि जीवित छ।
यिनको नाम तथा सिद्धान्त जपेर नथाक्ने र शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने काम अहिले पनि कायम छ। तर वास्तवमा यिनी एक खुँखार तानाशाह थिए।
यिनले चीनमा अंगीकार गरेको नीति तथा अत्याचारका कारण कम्तीमा चार करोड मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ। यिनका केही स्वभाव मानवआचरण विपरीत थिए।
माओको उपचार गर्ने चिकित्सक जी सी लीको किताबअनुसार यिनले जीवनमा कहिल्यै दाँत माझेनन्। किताबमा के पनि लेखिएको छ भने, यिनी अत्यन्तै कम नुहाउँथे। यिनी आफ्नो विचार विरोधीलाई सफाया गर्न रुचाउँथे।
मान्छेको मन सिद्धान्त र कर्मले जितेर होइन, निरंकुशतापूर्वक अघि बढ्ने शासक थिए यिनी।
यिनको जीवनकालमा मानिसहरू यिनले गरेको अत्याचार सुनेरै काँम्थे। द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा यिनले कम्तीमा २० लाख यहुदीलाई तिनले अंगीकार गरेको धर्मका कारण मारेका थिए। त्यतिमात्र होइन, यिनको सनकका कारण द्वितीय विश्वयुद्धमा लगभग सात करोड मानिसको ज्यान गएको थियो।
हिटलर जर्मनीको नाजी पार्टीका नेता थिए। नेसनल सोसलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टीलाई नै नाजी भनिन्थ्यो। नाजी जर्मनीमा एक राजनीतिक पार्टी थियो। यो पार्टी १९१९ मा प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् स्थापित भएको थियो।
नाजी नेतृत्व संसारबाट यहुदीलाई मेटाउनु पर्ने विचार राख्थ्यो। यहुदीलाई मेटाउन पाउँदा जर्मन नागरिक मात्र होइन, संसारको मानवतालाई फाइदा हुने उनीहरु बताउँथे। नाजीलाई यहुदीबाट वास्तवमा कुनै खतरा थिएन।
क्रूर शासकहरु अहिले पनि दुनियाँमा छन्। तिनले आफ्नो शासन अकंटक बनाउन नागरिकको हत्या गर्ने, विभत्स ढंगको सजाय दिने काम गर्दै आएका छन्। कतिपय मुलुकमा नयाँ ढंगको निरंकुश शासन भोग्न जनता अभिशप्त छन्। (एजेन्सीहररूको सहयोगमा)